Wararkii ugu dambeeyey Xaalada Magaalada Cadaado. - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Wararkii ugu dambeeyey Xaalada Magaalada Cadaado.
October 9, 2017 October 9, 2017 admin284
Jawiga magaalada Cadaado ayaa caawa dagan, waxaana ciidamada amniga oo feejignaan dheeri ah ka muuqato lagu arkayaa goobaha muhiimka ah magaalada. Sidoo kale ganacsade Liibaan Shuluq oo ay maanta xireen Ciidamada amnigu ayaa Caawa ku hoyanaya saldhigga booliska degmada Cadaado.
Liibaan ayaa maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha Cadaado, isagoo ka yimid magaalada Muqdisho, waxaana ilo xog-ogaal ah inoo xaqiijiyeen inuu Cadaado u yimid qorshe lagu abaabulayo doorasho lagu doorto siyaasi Axmed Shariif oo ay wadato dowladda Federaalka. Mr. Liibaan ayaa la sheegay inuu xalay shir albaabadu u xiran yihiin la qaatay RW Xasan Cali Kheyre, isagoo loo wakiishay fulinta Qorsha dowladu waddo. Xarigga ninkan ayaa dhabarjab ku noqonaya Qorshihii Villa Somalia, oo aad isugu howshay sidii ay Xaaf xilka ugu tuuri laheyd.
Dhanka wararka qaar ayaa sheegayaa in ganacsade Liibaan beri laga musaafurin doono magaalada Cadaado, waxaana suurtagal ah in Muqdisho ama Galkacyo midood loo diro, iyadoo maamulka Galmudug tixgalinayo codsi uga yimid odayaashiisa. Sidoo kale siyaasiyiin kale ayaa la filayaa in laga musaafuriyo Cadaado.
Waxaa sidoo kale Caawa lagu wargaliyey Saxaafiyiinta ka howlgala Magaalada Cadaado in ay beri subax yimaadaan Xarunta Madaxtooyada Galmudug, lamana oga arinta lagala hadli doono. Cadaado ayaa waxaa ku loolamaya dowladda Federaalka ah iyo Madaxweyne Xaaf oo hadda u muuqda inuu ka guuleysanayo.
Neymar, Luis Suarez Iyo Harry Kane Oo Kasoo Muuqday Liiska Xidigaha U Tartamaya Abaalmarinta Ballon d’Or 2017
Xog Ku Saabsan Shirka Hugaamiyaasha Maamulada oo Gabangabo ku Dhow
Villa Soomaaliya Oo Si Li Yaab Ah Uga Jawabtay Warbixintii UN Monitoring Group
November 15, 2018 November 15, 2018 News Editor
C/kariin Guuleed oo ka hadlay Xilka qaadistii lagu Sameeyey
Nin Soomaali ah oo lagu xiray Jarmalka